फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ माघ ९ देखि,कहाँ-कहाँबाट दिने आवेदन ? – Recent Nepal News
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ माघ ९ देखि,कहाँ-कहाँबाट दिने आवेदन ?	काठमाडौं,पुस २६ – फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको ६ लाख कित्ता आइपीओ माघ ९ देखि बिक्री खुला हुने भएको छ । एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको यो आइपीओमा न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतम तीन हजार कित्तासम्म भर्न पाइनेछ । कुल निष्कासन गरिने सेयरमध्ये ३० हजार कित्ता कर्मचारीलाई दिएको छ भने ३० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष कम्पनीहरुलाई छुट्याइएको छ । बाँकी पाँच लाख ४० हजार कित्ता सेयर भने सर्वसाधारणले पाउने भएका छन् ।
Previousसेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति मर्मत सुरु
Nextमेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने काम तीव्र,कहाँ के हुँदैछ ?